Ọtụtụ afọ gara aga, agbagorola m akpaaka ahịa m gaa na ama ama ama ama nke ọma (ọ bụghị Salesforce). Ndị otu m haziri ma mepụta mkpọsa ịzụlite ole na ole na anyị na -amalite n'ezie ịkwọ ụgbọala nnukwu okporo ụzọ… ruo mgbe ọdachi dakwasịrị. Ikpo okwu na -eme nkwalite dị elu wee kpochapụ ọtụtụ data ndị ahịa, gụnyere nke anyị.
Ọ bụ ezie na ụlọ ọrụ ahụ nwere nkwekọrịta ọrụ ọrụ (SLA) nke kwere nkwa oge, ọ nweghị ndabere na mgbake ike na ọkwa akaụntụ. Ọrụ anyị agaala ma ụlọ ọrụ ahụ enweghị akụrụngwa ma ọ bụ ike iji weghachi ya na ọkwa akaụntụ. Ọ bụ ezie na a gaara emezigharị atụmatụ anyị, atụmanya anyị niile na ndị ahịa anyị ọrụ kpochapụrụ. N'ezie, enweghi uzo iji megharia data di oke egwu ma bara uru. Echere m na anyị furu efu ọtụtụ narị puku, ma ọ bụrụ na ọ bụghị ọtụtụ nde dollar na revenue. Ikpo okwu mere ka anyị pụọ na nkwekọrịta anyị wee hapụ mmemme ibe ha ozugbo.
Ụlọ ọrụ dị ka Salesforce na -agagharị, na -emepụta ihe ọhụrụ, na -ejikọkwa ụdị ọsọ a na narị narị ndị mmepe na ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ihe na -agaghị ekwe omume ịzụlite na idobe koodu nke yiri ya maka ndị ahịa ịkwado na chekwaa data ha. Ihe ha na-elekwasị anya bụ nkwụsi ike sistemụ, oge dị elu, nchekwa, na ihe ọhụrụ…
Ọ dị mkpa ịkọwapụta na Salesforce abụghị isi ihe kpatara mfu data. N'ezie, ahụghị m n'onwe m ka ha na -emebi data ndị ahịa na mberede. Mwepụ data emeela site n'oge ruo n'oge, mana ahụbeghị m ọdachi (kụọ aka na osisi). Ọzọkwa, Salesforce nwere ụfọdụ ikike mbupụ maka data buru ibu enwere ike iji, mana nke ahụ adịghị mma dịka ọ ga -achọ iwu ndabere, ịhazi oge, ịkọ akụkọ, na ike ndị ọzọ gbara ya gburugburu ka ọ bụrụ nke zuru oke. ọdachi mgbake ngwọta.
Ndị aghụghọ - cybercriminals ndọrọ ndọrọ ọchịchị ma ọ bụ nke ọha na eze kpughere ma ọ bụ bibie data.
Rogue Ngwa -site na mgbanwe siri ike nke ngwa ndị ọzọ, enwere ohere mgbe niile na ikpo okwu nwere ike ihichapụ, degharịa ma ọ bụ mebie data gị dị oke mkpa.
Salesforce Sandbox Mkpụrụ - Gbasaa data na igbe sandbox maka imeputa ihe ngwa ngwa na gburugburu ọzụzụ dị mma yana Seeding Sandbox Enhanced.
OwnBackup na-egbochi gị ịhapụ data Salesforce CRM dị mkpa na metadata nwere nkwado akpaaka yana mgbake na-enweghị nchekasị… na ọnụ ahịa nke dabara adaba na ọkwa onye ọrụ.
Tags: ịgbanweendị aghụghọndi ojoo n’imenweghachiule na-adịghị mmaransomwarerogue ngwandị ahịaire ere ahịasalesforce nkwado ndabere na mpagharaahịa data data archivalndị ahịa ahịa mgbakeire ahịa igbe sandbox